Fiaraha-mientana ara-pizahantany voalohany amin'ny firenena maro, mpandray anjara maro no kintana vaovao amin'ny COP26 any Glasgow
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Fiaraha-mientana ara-pizahantany voalohany amin'ny firenena maro, mpandray anjara maro no kintana vaovao amin'ny COP26 any Glasgow
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • WTN
Tsy mbola asaina ny World Tourism Organization (UNWTO).
Ny hetsika, fa tsy ny fanambarana no tokony ho lalana hamerenana amin'ny fomba mahomby ny fizahan-tany, ary vonona ny hamirapiratra ity fiaraha-mientana ity, ary fiaraha-mitantana matanjaka vaovao.
Ny COP 26 ao Glasgow dia tsy mitondra hafatra ho an'izao tontolo izao fotsiny, fa ny fizahan-tany dia tokony ho anisan'ny vahaolana amin'ny fiovan'ny toetr'andro, fa io no hetsika voalohany nataon'ny Mpandray anjara amin'ny sehatra iraisam-pirenena voalohany fiaraha-mitantana amin’ny fizahantany .
Fotoana hanaovana hetsika izao fa tsy fanambarana.
Vao mainka nazava kokoa ny hoavy mahasoa sy sariaka ho an'ny fizahantany manerantany.
Ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro 2021 izay mitohy amin'izao fotoana izao any Glasgow, UK dia mety ho fanombohana endrika vaovao fiaraha-miasa manerantany miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany (UNWTO) dia heverin'ny maro fa tsy mahomby, tsy ampy vola ary tsy voakarakara dia mety ho tonga amin'ny fifohazana.
Nanomboka tamin’ny vina nataon’ny minisitry ny fizahantany Saodiana, HE Ahmed Aqeel Al Khateeb, sy ny mpiara-miasa aminy any Espaina HE Reyes Maroto mba hizara izany fahitana izany.
Farany, mandroso ny firenena sy ny mpandray anjara raha matory ny UNWTO noho ny tsy fahampian'ny mpitarika. Izany dia famantarana ny fanovana efa nilaina hatry ny ela ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany maneran-tany, ary angamba fotoana iray ho an'ny UNWTO vaovao amin'ny fanamboarana.
Fantatra fa mampiasa vola an-davitrisany i Arabia Saodita ho fampandrosoana ny fizahantany maneran-tany. Tsy mahasarika ho an'ny indostria ihany izany, izay resin'ny COVID-19 efa ho roa taona izao, fa manentana sy mampahery.
Raha manao sonia fanambarana ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany (UNWTO), ny fiaraha-mitantana voalohany amin'ny firenena maro samihafa dia momba ny hetsika.
Tsy ilaina ny milaza fa tena misy ny famatsiam-bola.
Filohan'i Meksika teo aloha ary filohan'ny toekarena vaovao momba ny toetr'andro
Nasehon'i Arabia Saodita fa tetezana eo amin'ny tany mandroso sy ny an-dalam-pandrosoana. Androany ireo minisitry ny fizahantany telo avy any Kenya, Jamaika ary Arabia Saodita nanatrika ny tontonana tao Glasgow momba ny fiovan'ny toetr'andro dia nilaza hoe: Ny indostrian'ny fizahantany dia maniry ny ho anisan'ny vahaolana amin'ny fiovan'ny toetr'andro mampidi-doza
Tetikasa 3 dingana ny fananganana ity fiaraha-mitantana vaovao ity.
Nanatrika ny hetsika androany ny Governemanta avy any Etazonia, UK, Kenya, Jamaika ary Arabia Saodita.
Tamin'ny dingana voalohany, firenena 1 no nasaina ho amin'ny fiaraha-mitantana:
Fikambanana iraisam-pirenena nandray anjara androany:
Ankoatra izany, nasaina hanatevin-daharana ny fiaraha-mitantana ny Banky iraisam-pirenena sy Harvard.
ICC dia misolo tena ny SME 45 tapitrisa. 65% no any amin’ny tany an-dalam-pandrosoana.
Raha nanontaniana i Gloria Guevara hoe rahoviana ireo fikambanana kely kokoa toa ny African Tourism Board sy ny World Tourism Network no asaina hanatevin-daharana, Gloria Guevara dia nilaza fa azo resahina amin'ny dingana 2 na 3 izany.
Tsy mbola asaina ny UNWTO.
Minisitry ny Fizahantany Arabia Saodita Ahmed Alkhateeb
Snr tsara hoy:
November 4, 2021 amin'ny 13: 04
Ireo endrika taloha ihany, tohanan'ny vola Saodiana ankehitriny, milaza zavatra taloha ihany. Nanana fahafahana hanao zavatra izy ireo, nefa tsy nanao izany! Gloria dia lehiben'ny WTTC ary nanao laharam-pahamehana ny fitomboana, ny fitomboana, ny fitomboana, ary ny tsy fisian'ny tontolo iainana, nandritra ny fotoana niasany. Andeha hojerentsika hoe inona izany - fiezahana mafy ho an'ny mahery mba hitazonana ny fihenjanana tsy mitsahatra eo amin'ny fandaharam-potoana, eo am-pijerena ny planeta mirehitra vokatry ny taonany tsy mihetsika.